Ugonyuluka ngokufa komyeni encwadini entsha
UNKK Letshego Zulu ugonyuluka ngokufa komyeni wakhe, uGugu Zulu, encwadini esanda kuphuma. Lo mfelokazi uvuke wazithatha
ZAZIKHONA izimpawu zokuthi usezowushiya lo mhlaba umdlali wezimoto zomjaho namabhayisikili, owashona ezama ukuqwala intaba iKilimanjaro ngeMandela Day ngo-2016. Namuhla kuphela iminyaka emithathu ashona uGugu Zulu, umkakhe uNkk Letshego Zulu, osekhiphe incwadi ngempilo yabo. Kule ncwadi esihloko sithi I choose To Live Life After Losing Gugu, uNkk Zulu uveza isithombe sokuthi wayevele engaphilile kahle umyeni wakhe ngaphambi kokuqwala intaba. Yize engazisoli ngesinqumo sokuqwala intaba njengomkhankaso wokusiza amantombazane aswele iTrek4Mandela, kuningi abona kungahambanga kahle.
“Ngikholelwa ekutheni konke kwenzeka ngesizathu futhi angiyena umuntu othanda ukusola uNkulunkulu. Nginqume ukungazivaleli emgodini omnyama ngilokhu ngizibuza imibuzo engaphenduleki. Nokho umyeni wami washeshe washona kusekuningi esikuhlelile,” kusho yena.
Encwadini yakhe uveza ukuthi belungiselela uhambo, uZulu wakhuculula ikamelo okwakunesikhathi embelesela ngalo engamnaki. Uveza nokuthi wayenenkinga yokucinana ngaphambi kohambo, abathatha ngokuthi kuzodlula ngoba bekungaqali. Kule ncwadi uveza ukusuka nokuhlala kusuka isidumo entabeni, odokotela bezama ukumsindisa. Ukungaphatheki kahle komyeni wakhe kwenza nokuthi ngosuku agcina ngalo ukuqwala intaba wacela ukuba sethimbeni elingasheshi kakhulu.
UNkk Zulu uthe lokhu kwamkhalisa ngoba wayengahlelanga ukuhlukana nomyeni wakhe. Okuvelayo kule ncwadi ukuthi kwaba nokungahambi kahle ethimbeni labezempilo elalizama ukusiza umufi. Ebuzwa ngalokhu uNkk Zulu uthe, “Kuningi impela engabona ukuthi akwenziwanga kahle kodwa angibambe gqubu futhi ngeke kungisize ukudinwa. Ukuthukuthela kwami ngeke kumbuyise uGugu.”
UNkk Zulu obuye wayoqwala intaba kulo mkhankaso kaMandela ngo-2017 nangonyaka odlule, uthe akekho ezinhlelweni zokubuyela maduze. Ubona sengathi usekufezile okwakumele akwenze ukukhumbula umyeni wakhe. Ngonyaka odlule waya eKilimanjaro nendodakazi yakhe uLelethu nonina. Emuva kwezinyanga ezimbili kushone umyeni wakhe, waphelezela abasemzini nonina abebefuna ukuyozibonela lapho kushonele khona umufi. Nguyise kaZulu kuphela ongayanga ngenxa yokugula, naye oshone emuva konyaka elandela indodana yakhe. UNkk Zulu, odume ngokuba yiFitness Trainer, uthe wanquma ukuvuka azithathe emuva kokukhunjuzwa ngumngani wakhe ukuthi umufi wayekugcizelela kanjani ukuthi kumele baphile sengathi bayaqala. Kule ncwadi unikeza amathiphu kwabashonelwe nokuthi uvuke kanjani wazithatha. Usenebhizinisi lePop Up Gym, ubhala ingosi yephephandaba ngezempilo aphinde ethule izinkulumo ezakhayo. Uthe uyafisa ukuba nenhlangano eseka abafelokazi abancane kodwa isikhathi asikho ngoba kumele asebenze ngokuphindaphindiwe ukukhulisa indodakazi yakhe. Incwadi isiyatholakala kwa-Exclusive Books.